PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - IZIMEMEZELO
HECC IN ZION
KWAZISWA abazalwane baleli bandla eliholwa nguMbhishobhi ML Nkanjeni ngonkonzo yentsha ezokuba seGlencoe mhla zingama-29 kuMandulo (September). Ngemibuzo shayela umxhumanisi, uMondli Zuma kwethi: 082 946 6558.
JERUSALEM KWAZISWA abazalwane beJerusalem ngenkonzo yalo yokubonga ezokuba KwaXimba mhla ziyisi-7 kuMfumfu (October). Isaziso sikhishwe nguSbusiso Maphumulo.
SOUTH AFRICAN COUNCIL OF CHURCHES AND COMMUNITY DEVELOPMENT LE nhlangano eholwa nguDkt Sizwe Mlaba imema bonke abefundisi bamahlelo ahlukene anezitifiketi zohlelo lwamaNonProfit Organizations (NPO)) emhlanganweni ozokuba sendlini yesonto lamaSheshi eMpangeni mhla zili-15 kuMandulo ngelesi-9 ekuseni. Ngemibuzo shayela kwethi: 0734625273 noma 0764061178. -------------------------
LE nhlangano inohlelo lokufundisa abalimi abasafufusa abaqhuba ezolimo ezilandela izindlela zemvelo (Organic Farming) ezingasebenzisi imishanguzo, oluzokwenzelwa epulazini eDududu, KwaZulu-Natal mhla zingama-24 kuMandulo ngele-10 ekuseni. Ngemibuzo shayela kwethi: 082
LE nhlangano yezenkolo izobe inenkonzo yokuhlonipha amakhosikazi ezingqalabutho zabefundisi abasekhona nalabo asebashona.
Le nkonzo izokwenzelwa EThekwini Community Church ngoMgqibelo ngele-10 ekuseni. Ngemibuzo shayela kwethi: 072